Maung Day isaMyanmar-born poet and artist. His art practice encompasses drawing, installation, video and photography.
မောင်ဒေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဖွား ကဗျာဆရာနှင့် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာပြုလုပ်မှုတွင် ဒရောရင်း၊ အင်စတော်လေးရှင်း၊ ဗီဒီယိုနှင့် ဓါတ်ပုံတို့ပါဝင်သည်။
Koyo Yamashita Born in Tokyo, Japan. Has been festival director of Image Forum Festival since 2001. Programmer of Theater Image Forum in Shibuya, Tokyo since 2005. He has been guest programmer/curator for many film and media art festivals and film events in and outside Japan.
ကိုယို ယာမရှီတ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ ယခုတိုင် Image Forum ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ ပွဲတော်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ တိုကျိုမြို့ ရှီဘုယအရပ်တွင် ကျင်းပသော Theater Image Forum ပွဲတော်အတွက်လည်း ရွေးချယ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှသာမက အခြားနိုင်ငံများတွင် ကျင်းပသော ရုပ်ရှင်နှင့် အနုပညာမီဒီယာပွဲတော်များတွင်လည်း ရွေးချယ်တင်ဆက်သူ၊ စီစဉ်ပြသသူအဖြစ်ပါ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
Vit Janecek isadirector, writer and producer, and associate professor at FAMU, Czech Republic. He isaFAMU co-founder and directed the FAMU Center for Audiovisual Studies in its early years. Between 2012 and 2015 he worked as the Head of FAMU International, the English section of FAMU. Together with his wife, acknowledged Slovak director and producer Zuzana Piussi, he founded Difilm Production. Asaco/producer he backed some of his own films and the full length film "The Monk" (by The Maw Naing, 2014, CZ/MM) as part of the FAMU Burma Project, which he leads since 2006.
ဗစ် ဂျလ်နားချက် ဗစ် ဂျလ်နားချက်သည် ဒါရိုက်တာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် FAMU ရုပ်ရှင်ကျောင်းတွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်ပါ လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ FAMU ရုပ်ရှင်ကျောင်းတွင် “အရုပ်နှင့်အသံ အနုပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုစင်တာ” ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ၊ တည်ထောင်စကာလများတွင် ဦးဆောင်စီစဉ်သူအဖြစ်ပါ တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကာလတွင် သူသည် FAMU ရုပ်ရှင်ကျောင်းရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားသည့် အပိုင်းတွင် ဦးစီးမှူးအဖြစ်ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စလိုဘက်နိုင်ငံသူ ဒါရိုက်တာနှင့် ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးလဲဖြစ်သည့်၊ သူ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဇူဆန်နာ ပူရူးဆီနှင့် ပူးတွဲပြီး D1 ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် သူ၏ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးသည့် ရုပ်ရှင်ကားများကို ထုတ်လုပ်နေသည့်အပြင်၊ သူဦးဆောင်ခဲ့သည့် မြန်မာ FAMU ပရောဂျက်ကာလအတွင်းဝယ်၊ ဒါရိုက်တာ သည်မော်နိုင်၏ “The Monk" (၂၀၁၄၊ ချက်နှင့်မြန်မာ) ကိုလဲ ပူးတွဲထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Khin Sanda Myint started to produce Music Videos in 2000 for Akari Production. She has been working as producer for Music Videos of famous singers such as Zaw Win Htut, Sai Sai Kham Hlaing, Saung Oo Hlaing, Kabar Bwe Mhue, Shin Phone, Wine Su Khaing Thein and many singers. Some she also directed. In 2004 she founded Heart & Soul Film and Videos Production, and produced many Music Video Albums and fiction film which release on CD and DVD and also produced fiction films for theatrical release.
ခင်စန္ဒာမြင့်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Akari ထုတ်လုပ်ရေးကို တည်ထောင်ကာ Music Videos များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ကဗျာဘွဲ့မှူး၊ ရှင်ဖုန်း၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း အစရှိသော နာမည်ကျော်အဆိုတော်များ၏ Music Videos များစွာကို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အချို့ကို သူမကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Heart & Soul ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Music Videos များ၊ ဇာတ်လမ်း CD များ၊ DVD များအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုပါ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။
Na Gyi, the founder and director of Fatty Gangster Production, has produced and directed feature films, music videos and television commercials. Before becomingafilmmaker, Na Gyi worked for 8 years as Director and Producer at Pin Lel Production. He founded his own production, Fatty Gangster Production in 2019. Na Gyi's films include: "Mi" (2018) which won Best Director of Photography at Asean International Film Festival, Best Director of Photography and Best Actress at Stars Awards (Local Academy Awards) and nominated for Best Picture at Asean International Film Festival. "Boma" (2014), "Where do you come from, What are you doing and Where are you going?" (2012) and "London Tale" (2018).
ဏကြီးသည် Fatty Gangster Production ကို တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ ရုံတင်ဇာတ်ကားရှည်များ၊ Music Videos များနှင့် တီဗွီကြေငြာများကို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖြစ် မဆောင်ရွက်မီ ပင်လယ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် တည်ထောင်သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ရှစ်နှစ်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးအဖြစ် Fatty Gangster Production ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဏကြီး၏ ဇာတ်ကားများမှာ - “မီ” (၂၀၁၈) [အကောင်းဆုံး Director of Photography ဆု ၊ အာဆီယံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် | အကောင်းဆုံး Director of Photography နှင့် အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု Stars Awards | အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုအဖြစ် အာဆီယံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် တွင် ဆန်ကာတင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ] ၊ “ဘိုမ" (၂၀၁၄)၊ "ဘယ်ကလာလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်ကိုသွားမလဲ” (၂၀၁၂)၊ နှင့် "London Tale” (၂၀၀၈) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
Htoo Paing Zaw Oo started making short films after graduating from University withadegree in Medicine in 2012. He won the Best Short Film Award at the Wathann Film Festival of the same year. His first feature Film "ည (Night )" was screened in Myanmar cinemas in 2017. It was followed by "သူစိမ်းအိမ် ( Stranger's House)" in 2019. His upcoming films are "Miles away under the Moon" (in post-production) and Yangon in Love (in production). Apart from pursuing directing films, he also made music videos and was awarded the Won Shwe FM Best Music Video Award in 2016 and 2017. Upcoming Films လရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်အဝေး (In Post-production) Yangon In Love (In Production)
ထူးပိုင်ဇော်ဦးသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)မှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဇာတ်ကားတိုများကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝဿန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် အကောင်းဆုံး ဇာတ်လမ်းတိုဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး Music Videos များကို ရိုက်ကူးခဲ့ရာ Shwe FM ၏ အကောင်းဆုံး Music Video ဆုများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်များတွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကား “ည” ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်ခဲ့ကာ၊ ဒုတိယဇာတ်ကား သူစိမ်းအိမ် (Stranger's House) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရုံတင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ရုံတင်ပြသမည့် ဇာတ်ကားများမှာ “လရဲ့ အောက်ဘက်မိုင်အဝေး” နှင့် “Yangon in Love” (ရိုက်ကူးဆဲ) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။